Home EGO AFRICAN FOOTBALL Samuel Eto'o Ụmụaka Akụkọ Karịa Eziokwu Ihe Nlekọta
Emelitere ikpeazụ January 24, 2019
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha "Sammy". Samuel Samuel Eto'o anyi na - akuko ihe omuma. Eziokwu na - ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omumaputa site na nwata rue oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ihe mgbaru ọsọ ya kama ọ bụ naanị mmadụ ole na ole tụlee Samuel Eto'o Bio bụ nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Samuel Eto'o Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu-Mbụ na Ndụ Ezinụlọ
Samuel Eto'o Fils a mụrụ na 10th nke March 1981 na Douala, Cameroon. A mụrụ ya nne ya, Christine Eto'o (a fishmonger) na nna ya, David Eto'o (onye na-akwụ ụgwọ). N'okpuru ebe a bụ ndị nne na nna mara mma nke Samuel Eto'o.
N'ịbụ nwata dị ka nwatakịrị, Eto'o bụ onye na-ahụ n'anya football nwere ọchịchọ nke ịghọ otu n'ime ihe kasị mma n'Africa. Ihe ochicho nke huru ya ka o malite oru ntorobia ya Kadji Sports Academy ke Douala ke Cameroon. Eto'o mere afọ anọ nke ndụ ya ka ọ na-achọ ịchọta ọchịchọ ọ bụla nke ụwa na mba ọ chọrọ.
Ịga France: Site na 1996, Eto'o gara France iji gbalịa maka ụlọ ịgba bọl na French. N'ụzọ dị mwute, a jụrụ ya. N'ihi nke a, ọ ghaghị ibi dị ka onye si mba ọzọ na-akwadoghị n'ihi enweghị akwụkwọ na njirimara kwesịrị ekwesị.
N'agbanyeghị mgbalị ya, Eto'o ka na-agbachitere nrọ ya na ọchịchọ ya ọbụlagodi mgbe ọdịnihu yiri ihe efu banyere football ya. Ọ bụ n'oge otu n'ime omume ndị Eto'o hụrụ na ndị na-egwu egwu si Real Madrid hụrụ ya mgbe ọ na-atọ ụtọ ịkụ egwu na France obodo Le Havre n'afọ 1997.
Samuel Eto'o Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu-Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Ọ bụ ezie na Eto'o kwụsịrị site n'ịgwụrụ Team B nke Real Madrid na 1997, ọ nọghị na-eto eto na-eto eto n'ihi na ọ na-adaba na nke atọ n'ịgba bọl na Spanish.
N'ihi ya, Real Madrid kwadoro Samuel Eto'o n'ọtụtụ klọb gụnyere Leganes, Espanyol na Mallorca, bụ ndị chọpụtara ọganihu dị ukwuu n'Amerịka nke Africa. N'oge na-adịghị anya, Mallorca zụtara Eto'o ka ọ bụrụ ihe na-adịgide adịgide n'afọ 2000 maka ego ego nke £ 4.4 Million.
Mgbe ịzụta ahụ, Eto'o malitere ọrụ ọhụụ na nke na-akpali akpali n'ime ọrụ football ya n'oge ahụ na-emetụta ihe mgbaru ọsọ 11 nke na-eme ya encomiums site na pundits na mgbasa ozi.
Samuel Eto'o Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu-Bilie Iji Mara Aha
Samuel Eto'o na-eme njem na Mallorca na-elebara ndị dike Spain anya na afọ 2003. N'afọ ahụ, Eto'o bịanyere aka na Barcelona, ​​njem nke na-egosi mmalite nke nnukwu ịrị elu maka Eto'o nke na-aghọ nke ihu na ihu maka Africa na mpaghara egwuregwu egwuregwu ụwa.
N'afọ ahụ ọ na-aga, Eto'o abụghị naanị ọdịda Afrika Player nke afọ maka afọ ahụ, ma nyeere ya aka ịbata Barcelona na oge ọhụụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Samuel Eto'o Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu-Ndụ mmekọrịta
Ihe na-ekwukarị na n'azụ nwoke ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma, ọ bụ nwanyị ka ọ na-emeghị ihe ọ bụla n'ịkọ akụkọ Samuel Eto'o ka o nwere obi ụtọ na Georgette Tra Lou, nke dị n'okpuru.
Ọ bụghị nanị na ọ na-akwado ọrụ ya na njem ya, kama ọ na-enwe òkè n'akụkụ ndụ ya.
Samuel Eto'o na Georgette Tra Lou abụwo nwata obi na enyi kachasị mma, ruo mgbe ọbụbụenyi ha mechara banye n'Alụmdi na Nwunye. Georgette na Samuel Eto'o ji alụmdi na nwunye na 2004 lụọ na mgbe afọ iri gasịrị, ha nwere ezigbo agbamakwụkwọ na Milan.
Georgette bụ nne nke anọ n'ime ụmụ ise Samuel bụ; Maelle, Etienne, Sienna na Lynn. Samuel Eto'o nwa ikpeazụ Annie (nke nne ya na-ese n'okpuru ya) bụ onye Eto'o hụrụ n'anya; Barranca, onye na-edozi onye Ịtali.
Samuel Eto'o Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu-Mkparịta ụka afọ
A ga-echeta na n'oge ụfọdụ na 2014, José Mourinho nọ na nsogbu ahụ na ịmata usoro Eto nke Eto.
Ọ ghọrọ nsogbu mgbe José Mourinho chepụtara uche ya mgbe ọ na-ekwu okwu nchịkọta akụkọ dịka o kwuru:
"Nsogbu na Chelsea bụ enweghị m akara ... Enwere m Eto'o ma ọ bụ 32 afọ, ma eleghị anya 35, onye maara?"
N'ịkụnye esemokwu nke afọ Samuel Samuel Eto'o, onye ọ hụrụ n'anya na nne ya nwa ya, bụ Annie, kwuru okwu ọha na eze mgbe ọ na-agbaso ọgba aghara afọ na 2014 site na ịkọ nke ahụ;
"Echere m na Samuel abụghị 35 ọ bụ karịa 39 ... a mụrụ Samuel na 1974 ma mee ya 39 ugbu a."
Ọ bụ ezie na ịkọ nkọ na echiche dịgasị iche, ọ dịghị ịgọnahụ eziokwu ahụ bụ na eto eto nke Eto mara ya nke ọma. Ọ zara José Mourinho site na ịkwa emo. O buru ụzọ mee agadi dị ka onye na-eburu ihe mgbaru ọsọ tupu mgbaru ọsọ ya bụ nke gosipụtara ya dị ka okenye.
Samuel Eto'o Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu-Ulo oru na nlekota ego n'Afrika
Samuel Eto'o nwere ọtụtụ ahịa achụmnta ego ma n'ime ma n'èzí Africa. N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọrụ ibe ya bụ ndị na-akụkọta akụ na ụba ma na-etinye ego na mba ọzọ, Samuel emeela nnukwu ego na itinye ego na Africa.
Samuel Eto'o nwere usoro ejiji ụwa nke na-emepụta uwe, okpu na sneakers bụ ndị a na-elebara anya na ma ahịa nke obodo na nke ụwa na ọtụtụ nde mmadụ na-egwu mmiri na ntinye ego na uru.
E wezụga na ụdị ejiji, Eto'o nwere mmasị azụmahịa na Ụlọ Ọrụ Mmepe nke Africa, na-enwe otu n'ime ụlọ ọrụ nkwurịta okwu na-aga nke ọma na Cameroon nke a na-akpọ Eto'o Telecoms.
Na 2017, Eto'o mepere ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị China dị na Chicago, ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke gosipụtara ịhụnanya ya na mmasị ya na nri yana echiche ya.
Samuel Eto'o Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu-Philanthropy
Samuel Eto'o bụ isi ihe na-eto eto. Ịhụ ka ezinụlọ ya dabere na Nna ya na-akwụ ụgwọ na-eri nri site na azụ azụ (site na nne ya) enyerela aka n'egwuregwu football na-enwe mmetụta ọmịiko maka ndị na-enweghị ihe ọhụụ na ndị na-enweghị atụ na obodo ya, mba na kọntinent
Na 2006, Samuel Eto'o guzobere ụlọ akwụkwọ football na-akpọ Samuel Eto'o Laikipia Football Academy, Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Akwụkwọ na Environmental na-agbasa na Africa. Ihe mgbaru ọsọ ya bụ ịkwalite ịhụnanya maka egwuregwu ahụ mgbe ọ na-emetụta mmụọ nke ịgba egwu na ụmụaka na ndị ntorobịa.
Tụkwasị na nke ahụ, Eto'o mepụtara akwụkwọ edemede / egwu egwu itoolu nke dabeere na ndụ ya na akụkọ football. Ọtụtụ ndị na-ege ya ntị na-abụ ụmụ na ndị nọ n'afọ iri na ụma bụ ndị ọ na-ezube ịkwali site n'ịkwalite nrọ ha na football na mmasị.
Samuel Eto'o Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu-Ihe Ịma Aka na Ọgwụ Ọjọọ
Ọ bụghịzi ozi ọma na ndị na-eme ihe ịga nke ọma n'Africa na-echekarị ịkpa ókè agbụrụ na mba ha egwu. Samuel Eto'o abughi ihe ndi mmadu na-acho n'emekorita ndi mmadu ka o meriri ndi mmadu ka ha na-eme ihe n'emeghi ka ha bia. Malite na Spain ruo Russia ịkọtụ ole na ole.
Na 2006, Samuel Eto'o na-akpa ókè na-eme ka a na-akpa ókè mgbe ọ na-agba ọsọ megide Real Zaragoza na Spain. O bu otutu ndi mmadu na-enwe olile anya, okwu nke ndi mmadu ndi mmadu na-ekwu banyere ndi mmadu.
N'ịbụ onye zuru ezu, Eto'o na Intanet gbara ya ajụjụ ọnụ, gbara mkpesa banyere ịkpa ókè agbụrụ o chere ihu n'ọtụtụ mba ọ kwadoro site n'ikwu na.
"Ndị mmadụ na-esi ọnwụ na ịkpa ókè agbụrụ na Russia ma ihe ahụ dị n'ụwa. Ekwughị m na ọ dịtụbeghị mgbe m nụchara okwu mkparị na ebe a: ọ ga-abụ ihe ọjọọ. "
Samuel Eto'o Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu-Ọ gara nke ọma
Samuel Eto'o bụ onye njem, onye na-eme njem n'echeghị echiche. Ekele maka ọrụ ịgba chaa chaa nke hụrụ ya ka ọ na-egwuri egwu na Spen, England, Russia, Qatar, Turkey, Ịtali, na-ekwu banyere ole na ole. N'ikpeazụ, Samuel Eto'o na-egwu bọl na ọgbakọ iri na otu na mba isii !.
Inye ajụjụ ọnụ Courier Russia na 2012 Eto'o kpughere ihe ọ masịrị banyere obodo abụọ ọ hụrụ n'anya kachasị.
"Abụ m onye na-ahụ New York na Moscow n'anya ka m chee echiche n'ihi na ọ dịghị mgbe ọ na-ehi ụra. Na elekere anya abụọ nke ụtụtụ, a ga-enwe ebe ọ bụla ị ga-eri ma ọ bụ ṅụọ. Moscow na-enye ohere a na awa iri abụọ na anọ na iri abụọ na anọ. Obodo a na agbanwe mgbe niile. Oge ikpeazụ m gara ezumike na ha na-ewuli ụlọ ebe m bi. Otu ọnwa na ọkara mgbe e mesịrị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile. Dị ka New York, ndị mmadụ anaghị akwụsị. Mmetụta a dị na-amasị m. "
Samuel Eto'o Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu-Eziokwu ahụ
Otu àgwà kachasị mma nke Eto'o nwere bụ ihu ọchị ya na mgbe ụfọdụ ihe ngosi egwu nke ọ na-egosipụta n'oge nnọkọ oriri na ọṅụṅụ. Onye egwuregwu nke kachasị mma nke Afrika n'oge niile na-egosipụtakwa àgwà ọma nke ma mara ma na pitch.
Iji weghara ya, o nwere ịhụnanya miri emi maka ezinụlọ ya ma nwee ogologo oge iji mee ka ha dị nso.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ Samuel Eto'o Ụmụaka na akụkọ eziokwu ndị dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Bọọgụ nke Cameroon Football
Rigobert Song Childhood Story Plus Ihe Na-emeghe Ihe Echiche
Victor Wanyama Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma
Riyad Mahrez nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Iwu Mba Machị 16, 2019 Na 4: 33 pm
Akụkọ na-egbuke egbuke m na-achọ ogologo oge. Anyị niile na-enweta uru mgbe anyị na-amụta ụdị ọdịbendị na omenala nke ndị na-eme anyị obi ụtọ.
Kalidou Koulibaly Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na-adịghị Agbanwe Ihe
Thomas Partey Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Wilfred Ndidi Child Story Story Na-emeghe Ihe Echiche